‘लिलिबिली’ मा अनुप र सविनका अगाडी सफल बन्लान त प्रदिप ? – तहल्काखबर
‘लिलिबिली’ मा अनुप र सविनका अगाडी सफल बन्लान त प्रदिप ?
फिल्मी संसार मनोरञ्जन
२०७४ फाल्गुन २३ March 7, 2018 गोपिन पोखरेल
लभस्टोरी फिल्म ‘प्रेमगीत’ बाट रातारात चम्किएका युवा स्टार प्रदीप खड्का अभिनीत प्रतिक्षीत फिल्म ‘लिलिबिली’ आउँदो चैत ३० गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । यस वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘प्रेमगीत २’ पछि उनी यो फिल्मबाट पुनः पर्दामा फर्किन लागेका हुन् ।
निर्माण अगावैदेखि चर्चामा रहेको यस फिल्मका लागि प्रदीपले २२ लाख बढी पारिश्रमिक बुझेको चर्चा छ । मंगलवार साँझ ‘लिलिबिली’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भयो । फिल्ममा प्रदीप र नव-नायिका जसिता गुरुङको प्रेममा अभिनेता अनुप विक्रम शाही भिलेन बनेका छन्
जुन फिल्ममा अनुप हुन्छन् त्यहाँ हिरोलाई थ्रेट हुन्छ । कति फिल्ममा उनका कारण हिरो छाँयामा समेत परेका छन् । ‘लिलिबिली’ मा प्रदीपलाई अनुपको उपस्थिति महंगो पर्ने त होइन ?
ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने, ‘फिल्ममा जति भयंकर भिलेन भए पनि आखिर अन्तिममा जित्ने त हिरोले नै हो । त्यसैले जति भयंकर भिलेन राखे पनि त्यो मलाई नै फाइदा हो ।’
उनले फिल्ममा अनुप र अर्का अभिनेता सविन श्रेष्ठलाई आफैंले सिफारिस गरेको पनि खुलाए । ‘फिल्ममा जुन क्यारेक्टर छ त्यो उहाँहरुलाई नै सुहाउने छ । म आफैंले सविन र अनुप जीलाई राख्नका लागि निर्देशक मिलन चाम्सलाई आग्रह गरेको थिएँ ।’, उनले भने । ‘लिलिबिली’ मा प्रदीपले जसितासँगै अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँग पनि रोमान्स गरेका छन् । फिल्मीखबर
निःशुल्क स्वास्थ्य चेकजाँच र पौष्टिक आहार घर घरमै वितरण
पारस लामाको ‘वाउ क्या राम्री सोल्टिनी नानी’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
२०७४ माघ २६ February 9, 2018 गोपिन पोखरेल
‘शेरबहादुर’को ट्रेलर रिलिज
श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटनावश पानीमा डुबेर भएको खुलासा